Etu m si chọọ ihe ngosi m gosipụtara maka Social Media na Socialba ụba Social Traffic site na 30.9% | Martech Zone
Monday, March 1, 2021 Monday, March 1, 2021 Douglas Karr
Mbubreyo ikpeazụ November, M kpebiri na m nwalee si optimizing m ihe osise n'ihi na elekọta mmadụ media ịhụ ma ọ ga-aba uru ọ bụla. Y’oburu na ibu onye ogugu ma obu ndi edenye aha n’oge na-adighi anya, imara na m na eji saiti m n’eme ihe nile.
Emebe a ọzọ gbara ọkpụrụkpụ oyiyi na-akọrọ na-elekọta mmadụ media na-agbakwụnye 5 ma ọ bụ 10 nkeji m nkwadebe nke isiokwu ya mere na ọ bụghị a nnukwu ulo oru mbo nke oge… ma nkeji mgbe niile tinye na m chọrọ ịkpachara anya na m na-etinye oge m amamihe mgbe ọ na-abịa Martech Zone.
Ọ bụ ezie na m na-ejide ụfọdụ foto foto ndị na-anọchi anya ọdịnaya ahụ, m kpachaara anya wuo onyonyo gosipụtara nwere ihe ndị a:
size - M wuru a template na Onye ihe ngosi nke ahụ bụ 1200px obosara site 675px toro ogologo. Emekwara m gbanwee isiokwu m iji gosipụta onyogho ndị a kachasị mma.
mbọn - Anaghị m etinye aha saịtị ahụ mana na-etinye logo ahụ oge niile ka e wee mara ya na mmelite mgbasa ozi m.
aha - Aha na-akpali akpali nke na-anaghị adaba mgbe niile na ederede m. Enwere m ike ịkwalite aha post maka ọchụchọ mana degharịrị aha m n’onyonyo m iji gbalịa ịpịkwu ọtụtụ clicks.
Image - Enwere m ndenye aha na Depositphotos ebe m nwere ike ịchọ ngwa ngwa ma chọta nnukwu ihe atụ nke m nwere ike ibudata ma tinye.
M na-eji Feedpress iji na-ebipụta ihe m na akpaghị aka na ntanetị m. ihe si na ya pụta bụ tweet ma ọ bụ mmelite Facebook nke pụtara ìhè. Nke a bụ otú o si dị Twitter:
Kedu ka Digital Marketing si azụ nri ahịa gị https://t.co/QMp6i6aq18 #ozi pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
- martech zone (@egha_egha) February 28, 2021
Nke a bụ otu onye si ele anya Facebook:
Na na LinkedIn:
N'ihi na edere aha ahụ n'asụsụ Bekee, emere m nyocha nke ọnwa ole na ole gara aga, wepụ ihe ọ bụla metụtara nje, ma belata ndị na-ege ntị na United States, Canada, United Kingdom, New Zealand na Australia. Nsonaazụ ahụ na-eju anya…
N'ime Google Analytics, a oge-n'elu-oge analysis nke m mmadá '' media mgbasa ozi referrals mere na a 30.9% abawanye na peeji nke echiche na-abịa site na mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ihe osise m kachasị mma.
N'ụzọ na-akpali mmasị, usoro mgbasa ozi mmekọrịta m na-etinye obere oge na-arụ ọrụ na ibe Facebook, nwere mmụba kachasị dị egwu increase 59.4% abawanye.
Ọ bụghị ihe niile zuru oke… M chọpụtara na m nkezi oge na peeji nke na peeji nke kwa nleta nke ndị ọbịa ọhụrụ a dara (ihe na-erughị 10%) yabụ ka m na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa, anaghị m arụ nnukwu ọrụ na idebe ha ebe a.
M na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ma na-ebuli saịtị ahụ n'ụzọ ndị ọzọ, ọkachasị na-aga ọtụtụ narị akụkọ ochie otu izu, na-emelite ụfọdụ, na-ewepụ ụfọdụ, na-ebugharị ọtụtụ, ma na-arụ ọrụ na ogo saịtị ahụ. Emekwara m ihe ọrụ ntụgharị akpaaka nke hụworo ka ọnụọgụ ndị ọbịa si na mba ndị na-asụghị Bekee.
Mgbalị ndị a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu maka inweta afọ stats kwa afọ maka ụbọchị 30 ikpeazụ:
Trazọ okporo ụzọ gbagoro 58.89%
Nchọgharị Organic dị elu 41.18%.
Mediazọ mgbasa ozi mgbasa ozi dị elu 469.70%
N'ozuzu, m na saịtị nwere banyere okpukpu abụọ ya okporo ụzọ… nke m mara mma obi ụtọ banyere!
Chọrọ enyemaka na Digital Digital gị?
Y’oburu n’ichoputa saiti gi ya na ufodi aka nke nwere ike ime ka inweta ihe gi, nweere onwe gi igota m DK New Media. Enwere m ike ịme nyocha maka gị, nye ọzụzụ otu gị, ma ọ bụ were gị dị ka onye ahịa iji nyere gị aka melite nsonaazụ ahịa dijitalụ gị. Amaara m nke ọma na njikarịcha saịtị WordPress ma ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo akụrụngwa na enyemaka mmepe.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta maka ọrụ dị iche iche n'isiokwu a.
Tags: ihe osisemgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe yaihe osise soshal midiamgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi